Shots Blasting Machine ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Shot Blasting Machine Factory
Q69 H Beam အမျိုးအစားရိုက်စက်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါ
Q69 H Beam အမျိုးအစားရိုက်စက်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ တံတားနှင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများတွင်သံမဏိပြားနှင့်သံမဏိကိုယ်ထည်များ၊ သံမဏိပြားများ၊ သံမဏိပြားများ၊ သံမဏိပြားများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသံချေးနှင့်ပန်းချီကားများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် Q69 စီးရီးရိုက်စက်သည်အသုံးပြုသည်။
၁) ။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဇုန်သည်ကွန်ပျူတာဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအပေါ်နှင့်အောက်ရိုက်ချက်သည်ကောင်းစွာဖြန့်ဝေထားသည်။
2) ။ ဒါဟာ photoelectric ထောက်လှမ်းချမှတ်။ ၎င်းတွင်အကျယ်ကိုတိုင်းတာခြင်း၊ အမြင့်ကိုတိုင်းခြင်း၊
3. နည်းပညာ Parameter: ပူးတွဲ
ရရှိနိုင် 4. စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများ
သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။ ဒါကြောင့် PLS ကသင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်သင်၏တိကျသောသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုအသိပေးပါ။
5. ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုစက် key ကိုအစိတ်အပိုင်းကိုရှောက်သွားပါ
။ roller ပေါ်ကိုစနစ်
။ shot separator
Tumblast စက် Tumble Belt ကြိုးနှင့်စမ်းရေပေါက်များဖောက်ခွဲခြင်း
Professional စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုပေး။ သင့်ရဲ့အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်နှင့် workpiece အရအသင့်တော်ဆုံးစက်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
Shot blasting machine သည်သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးစက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
၁။ စက်သည် cantilever centrifugal ပေါက်ကွဲမှုဘီးကိုအသုံးပြုသည်၊ သက်တမ်းရှည်၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားလက္ခဏာများရှိသည်။
၃။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောရာဘာကိုသုံးပါ၊ အရာ ၀ တ္ထုတိုတိုက်မှုပျက်စီးခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလျှော့ချပြီးစက်၏ဆူညံသံကိုလျှော့ချပါ။
4. Pulse ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူကိုသုံးပါ။ ဖုန်မှုန့်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်။
Crawler shot blasting machine ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမမှာသန့်ရှင်းသောအမှိုက်ပုံးထဲတွင်သတ်မှတ်ထားသောအလုပ်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပြီးသောအခါတံခါးဝကိုပိတ်ထားပြီးစက်ကိုစတင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမြန်နှုန်းဖြင့်ပစ်ခတ်သောပေါက်ကွဲမှုစက်မှပစ်ချလိုက်သောအတောင့်များသည်ပန်ကာရောင်ခြည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသန့်ရှင်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်အတွက်အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အညီအမျှထိုးနှက်သည်။
Peening Machine ကိုရိုက်, ပေါက်ကွဲမှု H ကိုရိုက်ကူး, Shot Blasting တာဘိုင်, သေနတ်ပစ်ပေါက်စက်, Shasting Blasting Wheel, ပေါက်ကွဲမှု Spare အစိတ်အပိုင်းများကိုပစ်ခတ်, ထုတ်ကုန်အားလုံး